“Avelao Ny Rosiana Ihany No Hamafa Ny Arabeny “: Mieritreritra Ny Momba Ny Herisetra Ara-Poko Ireo Vitsy An’Isa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2013 2:45 GMT
Fanakorontanana fiainam-bahoaka, korontana ary fandravàna trano fitehirizam-bokatra tao amin'ny distrikan'i Biryulyovo any Mosko, taorian'ny famonoana an'i Egor Shcherbakov, 25 taona, izay heverina ho teo an-tànan'ny teratany Azerbaijana iray, no nanery an'i Rosia hiatrika indray ny “olana momba ny zom-pireneny.”
Ampiasan'ny tia tanindrazana ” mankasitraka ny fiovàna – progresista” toa an-dry Alexey Navalny [ru] sy Egor Holmogorov [ru], mpanohitra an'i Kremlin, ilay korontana ho vimiaina mba hitakiana ny fametrahana rafitra hentitra amin'ny fanomezàn-dàlana ho an'ireo firenena any Kaokazy Atsimo sy Azia Afovoany. Ireo mpitoraka bilaogy mpomba an'i Kremlin toa an-dry Stanislav Apetyan [ru], kosa etsy andanin'izany, dia milaza ireo herisetra ho raharaham-pivavahana sy tsy fahombiazan'ny mpitandro filaminana. Ny hany feo tsy re tamin'ny resaky ny daholobe dia ny an'ireo “olona tsy manana endrika slave” — voambolana malalaka hilazana ireo foko Rosiana vitsy an'isa an-tapitrisa, sady avy any amin'ny Firaisana Sovietika taloha no avy any amin'ny toerana mitoka-monina any Kaokazy Avaratra. Ireo vahoaka ireo angamba no tena mila betsaka ny resaka fandrosoana, ary miteny amin'ny alalan'ny aterineto ny sasany amin'izy ireo.
Nitsikera tena kokoa ireo Azerbaijana sasany. I Tair aliev, mpandidy mpanova endrika , 53 taona, izay niala tany Baku ho any Mosko fony izy sivy taona dia nanoratra ny momba ny fahasahiranan'ireo sasany mpiray tanindrazana aminy hizatra ny fiainana any Rosia ary nanamafy fa efa an-taona maro no efa sarotra io toe-draharaha io raha tsy teo ny toetran'ny Rosiana mahay ” mandray, mandefitra sy tsy miraika” . Ao aminà lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe “ Iza no manakana antsika tsy hiaina ara-dalàna ?” [ru], no anamarihan'i Tair Aliev ny fahitany an'i Baku tamin'ny fahazazàny ho tanàna manankarena kolontsaina sy olona samy hafa fihaviana nefa noravan'ireo Azerbaijana izay nifaneraserany tamin'ny fotoana naharava ny Firaisana Sovietika:
Tena atsimo sy avaratra raha ny fomba fijerin'i Aliev an'ireo Rosiana vitsy an'isa. Nomarihan'i Nazim Kalcha, Khirgize monina ao Mosko ny fanesoana [ru] mandrakariva atao amin'ireo teratany avy ao Azia Afovoany matetika atao lasibatra ho setrin'ny famonoana Rosiana nataon'ny Kaokaziana Tatsimo sy Tavaratra. Nosoratan'i Kalcha ao amin'ny Fergana News, vavahadim-baovao an-tseraseran'i Azia Afovoany, fa taratry ny hoavy fotsiny ihany ny tsy fahaiza-miainan'ny Rosiana :
Nanaovana adihevitra lava [ru] ireo korontana tany Biryulyovo, tao amin'ny faritra natokana ho an'ny fanehoankevitra tao amin'ny tranonkalam-baovao mahaleotenan'ny Uzbek, UZNews.net, izay hanehoan'ny maro ny hatezerana momba ny zavatra atao amin'ireo mpifindra monina any Rosia. Mpampiasa iray, i “hank,” nanoratra tamin'ny fandikana tsirairay ny soratra Rosiana, no nanakiana ny tsy fahombiazan'ny Firaisana Sovietika amin'ny fampiharana ny politikan'ny fahazahoana zom-pirenena, izay nanaovany fampitahàna manjavozavo tamin'i Etazonia :
Raha tsy horesahana ny fihetseham-po tahaka izany, miankina tanteraka amin'i Rosia i Azia afovoany sy i Kaokazy amin'ny resaka asa sy ny fandefasam-bola. Saika ny antsasaky ny PIB-n'ny Tajikistana no miantehitra amin'ny fandefasam-bola avy any Rosia. Mifanindran-dàlana amin'izany koa, miankina amin'ireo mpiasa mpifindra monina ny toekarena Rosiana. Raha toa ka mbola mifamatotra ny toe-karena sy ny tantara eo amin'ny Rosiana, ny Uzbeks, ny Tajiks, ny Dagestanis ary ny Azerbaijana, ny tsy fanaovan'ny governemanta hetsika manoloana ny fitomboan'ny fitiavan-tanindrazana nasionalista dia midika fa mbola hitohy hiha-rava hatrany ny fifandraisan'ireo foko.